Etu ederede kacha mma Blog ga-eme ka ị bụrụ Onye Mma | Martech Zone
Ọ dị mma, aha ahụ nwere ike ịbụ ntakịrị nduhie. Mana ọ dọbara uche gị ma mee ka ị pịa site na post, ọ bụghị ya? A na-akpọ ya linkbait. Anyị na-abịa na a na-ekpo ọkụ blog post aha dị ka na-enweghị enyemaka… anyị na-eji Portent si Content Echiche Generator.
Ndị maara ihe na Ebugharị ekpughela olee otu echiche maka igwe na-enye ọkụ bịara bụrụ. Ọ bụ nnukwu ngwaọrụ nke na-eme ka ọ dị elu Usoro njikọ njikọ nke a na-anwa ma bụrụ eziokwu:
Ego nko - ndị mmadụ na - ekekọrịta ọdịnaya mgbe ị na - eti mkpu.
Mwakpo nko - site na ịga n’ihu, ị nwere ike ịkpalite mmasị.
Isi nko - oke ihe eji enyere mmadu aka bu ezigbo ihe omuma!
Nko nko - Okwu na-ewu ewu na-eme ka ịpịkwu clicks.
Nko nko - mepụta esemokwu ma ị nweela nko ọzọ.
Ọchị nko - You're na-agụ post a, nri?
Utu aha di oke nkpa na ọdịnaya gi. Ihe masịrị m banyere ngwa ọrụ a bụ na ọ naghị apụta aha, ọ na - akọwakwa ihe kpatara aha a ji arụ ọrụ dịka njikọta. Ọ bụghị zuru oke oge ọ bụla, mana ọ na-atọ ụtọ ma na-ewepụta echiche ọdịnaya dị oke egwu iji dee post a banyere ya!
Gbalịa Portent's Free Content Idea Generator
Tags: nnabata ihe eji ewe iheechiche generatorejikọ njikọUsoro njikọ njikọibu